နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော? - Yangon Media Group
နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော?
နေပြည်တော်၊ မတ် ၂၂
နိုင်ငံ့စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့ ရသည့်စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်နှင့် ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို ဟန်ချက်ညီ ဖြစ်ပေါ်လာရေးမှာ MSME များက အဓိက မောင်းနှင်အားများဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယ သမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်း နေပြည်တော်၊ (MICC-2) တွင် အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (MSMEs:_ Micro, Small and Medium Enterprises) ၏နိုင်ငံတော်အဆင့် ထုတ်ကုန်ပြပွဲပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ရာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယ သမ္မတဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အဖွင့် အ မှာစကားပြောကြားခဲ့ရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော် လွှားနိုင်ရန်နဲ့ ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို ဟန်ချက်ညီဖြစ်ပေါ်လာရေးမှာ MSME များက အဓိကမောင်းနှင်အားများဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ MSME များဖြစ်လို့ MSME များဖွံ့ဖြိုးမှသာ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသအနှံ့ MSME များအား လိုအပ်တဲ့နည်းပညာများပံ့ပိုး ရေး၊ အရင်းအနှီးများရရှိစေရေး၊ ကျွမ်း ကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးရေးတို့ ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ပြော ကြားခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတော်အဆင့် MSME ထုတ်ကုန်ပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပရခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား ရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီး မှ MSME ထုတ်ကုန်ပြပွဲပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိခဲ့သူများအား နိုင်ငံတော်အဆင့်အ ဖြစ် ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဒေသအဆင့်မှ နိုင်ငံတော်အဆင့် အထိကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒပါ ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသော အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီး ပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးရန် ဟူသည့် ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ MSME များဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး၊ ဒေသအသီး သီးရှိ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများနှင့် ရောင်း ဝယ်မှုကဏ္ဍများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားလာစေရေး၊ နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင် ရာအသိပညာမြင့်မားလာပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပ MSME များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လာစေရေး၊ သွင်းကုန်အစား ထိုးမှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရေးနှင့် တီ ထွင်ကြံဆမှုစွန့်စားမှုများဖြင့် ဆန်းသစ် သည့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်လာစေရေး တို့ကိုမျှော်မှန်းပြီး ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ယခု ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသောထုတ်ကုန်များ သည် MSME လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အ သိအမှတ်ပြုအမှတ်တံဆိပ်(MSME Logo) ကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အ ဆိုပါ logo အားအသုံးပြုခွင့်ရရှိသော လုပ်ငန်းများသည် ဈေးကွက်မှ တုံ့ပြန်အ ကြံပြုချက်များကိုရယူပြီး စားသုံးသူအ ကြိုက် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်စည်များ ဖြစ်လာစေရေးအတွက် မိမိတို့ brand များ၏ အားသာချက်၊ အကောင်းဆုံးဝန် ဆောင်မှုများဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက် အောင် ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ MSME များအတွက် လိုအပ်သည့်ငွေကြေး အရင်းအနှီးများရရှိစေရန် ချေးငွေအစီအ စဉ်များဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ နိုင်ငံ တော်၏အစီအစဉ်အရ SME ချေးငွေ ကျပ် ဘီလီယံ ၃ဝ၊ အပေါင်မဲ့အာမခံစနစ် (CGI) ချေးငွေကျပ် ၇ ဒသမ ၃၉၃ ဘီလီ ယံ၊ JICA ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီချေးငွေ two-step-loan ယန်းငွေ ဘီလီယံ ၂ဝ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ကျပ်ဘီလီယံ ၂၅ဝ၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုး ရေးချေးငွေ ကျပ် ဘီလီယံ ၂ဝဝ၊ ဂျာမန်ဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ် (KfW) ချေးငွေယူရို ၁၅ ဒသမ ၃ သန်းစသည့်ချေးငွေများကို ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့်ပူးပေါင်း ပြီး MSME လုပ်ငန်းများသို့ ထုတ်ချေးပေး လျက်ရှိကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် MSME ထုတ်ကုန်ပြပွဲပြိုင်ပွဲများကို ၂ဝ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက ကျင်းပ ခဲ့ရာ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ပုသိမ်၊ တောင်ကြီး၊ မုံရွာ၊ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင်နှင့် မြိတ် မြို့များတွင် အစဉ်လိုက်ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆို ပါပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိခဲ့သူများအား ယခုအမျိုးသားအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် ထပ်မံ ယှဉ်ပြိုင်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်အဆင့် မြို့ကိုးမြို့ တို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြပွဲပြိုင်ပွဲကိုးပွဲ၌ အသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ဆု ၃၉ ဆု၊ အငယ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် ၄၃ ဆု၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် ဆု ၄ဝ၊ စုစုပေါင်း ၁၂၂ ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ နေပြည်တော်၊ (MICC-2) တွင်အသေး စား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ (MSMEs: Micro,Small and Medium Enterprises) ၏နိုင်ငံတော်အဆင့် ထုတ်ကုန်ပြပွဲပြိုင်ပွဲ များကိုမတ် ၂၂ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
အကယ်ဒမီပွဲ ဖိတ်ကြားခံရပြီးမှ တက်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရသော်လည်း ပွဲတက်ရောက်သွားမည်ဟု
”တိုက်ခိုက်မှုတွေကို စိတ်ထဲမှာမထားဘူး။ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်သွားမယ်ဆ?
ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်နှင့် ဂျက်စတင်ဘီဘာ အပြီး လမ်းခွဲပြီဟုဆို
မွန်လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ အဆိုပြုချက် အမျာ?
၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်မြင်ရန် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းေ??